> Resource> Naghachi> Olee otú iji weghachi-ehichapụ nkebi ma Weghachi ehichapụ Data na Ọ
Gịnị bụ partitioning?
Partitioning bụ ka ha kee uka nchekwa (atụ, diski ike) n'ime dịpụrụ adịpụ ngalaba, na onye ọ bụla ngalaba bụ a nkebi, dị ka C / D / E / F mbanye. -Ekwu, C mbanye bụ usoro nkebi ebe anyị wụnye ịwa usoro. Partitioning bụ karịsịa bara uru ma ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ karịa otu sistemụ. Ka ihe atụ, i nwere ike igbunye otu nkebi maka Windows XP na ọzọ maka Windows 7.
Olee otú iji weghachi ehichapụ nkebi?
"M arụnyere Windows XP on a ọhụrụ ike mbanye ụnyaahụ. E nwere 2 mpụga ike draịva jikọọ m PC.I jụrụ ịbanye mbanye iji wụnye ya n'oge usoro. Ma m na-ezighị ehichapụ nkebi nke mbanye. My laptọọpụ nwere ike aghọta ugbu a m mpụga HDD, ma m na-enweghị ike imeghe ya. Enwere m ike weghachi ehichapụ nkebi ma m data? "
Azịza ya bụ ee. Mgbe ahụ mere anyị nwere ike iweghachi ehichapụ nkebi ma m data?
Ọ na-adabere nkebi tebụl na buut oru na ma usoro nwere aghọta nkebi ma ọ bụ. Ọ bụrụ na nkebi buut oru bụ ehichapụ ma ọ bụ mebiri site virus, nkebi ga-apụghị ịhụ anya, ndị ọzọ okwu, ị na-eche na i ehichapụ nkebi na-efu ndị data na-ehichapụ nkebi.
Ma n'ezie, data-anọgide n'ebe ahụ, ha bụ ndị dị nnọọ keerughi na ị pụghị ịhụ ha na kọmputa m. Nkebi Iweghachite modul nke Wondershare Data Recovery pụrụ ịtụle dum diski ike na ịchọpụta na-ehichapụ nkebi, mgbe na i nwere ike weghachi ehichapụ nkebi ma na-azụ gị mkpa faịlụ.
Ọ bụ nchebe iji maka naanị agbake gị partitions site naghachi nkebi tebụl ma ọ bụ buut oru, nke pụtara software ga-mgbe na-agbali dee data na nkebi nke ị chọrọ weghachi. E wezụga na, na-ekpe ikpe version ga-egosi gị furu efu / ehichapụ nkebi, na zuru version-ahapụ gị weghachi ya.
TIFF Iweghachite: Olee naghachi TIFF Files